Ngokuka-Gurman, i-ID yobuso iza kuza kwi-Mac kwiminyaka embalwa | IPhone iindaba
Ngokuka-Gurman, i-ID yobuso iya kufika kwi-Mac kwiminyaka embalwa
Ubuso be-ID ibe yeyona teknoloji ibiyeyona nto iphambili kwingxoxo mpikiswano kulo nyaka wobhubhani. Kwaye yonke into iyatshintsha xa kufuneka unxibe imaski nanini na xa uphuma ekhaya. UApple umamele abasebenzisi kwaye ngoku ukuba siphethe iApple Bukela ukuvula kwethu i-iPhone xa sijonga imaski. I-ID yobuso ihlala nathi, kwaye kubonakala ngathi siza kuyifumana kungekudala kuzo zonke izixhobo ze-Apple ...
UMark Gurman enye yeyona nto ephambili rumurologists ukusuka eCupertino, uyazi ukuba ngamanye amaxesha ichanekile kwaye ngamanye amaxesha ayisiyiyo ... Kwaye ngoku iyatsho Ngokuqinisekileyo siza kubona i-ID yobuso kwiiMacs kwisithuba seminyaka emibini, Itekhnoloji enokunceda kakhulu xa usebenzisa iilaptops zethu. Ngokwengxelo zikaGurman eBloomberg, «ENdiyathemba ukuba utshintsho kubuso be-ID luya kutshintsha ekugqibeleni. Ayizukwenzeka kulo nyaka, kodwa ndibheja i-ID yobuso yeMac iza kwiminyaka embalwa.. Ndicinga ukuba zonke ii-iPhones kunye nee-iPads ziya kutshintshela kwi-ID yobuso kule minyaka mibini. Inzwa yokuqonda ebusweni inika iApple izinto ezimbini ezibalulekileyo: ukhuseleko kunye nenyani eyongeziweyo. I-ID yokuChukumisa, uninzi lukhetha ukujongana ne-ID, inika kuphela ukhuseleko.
Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni Ngokuqinisekileyo siya kuyibona i-ID yobuso kuzo zonke izixhobo ze-AppleEkugqibeleni, yeyona nto ibheja yenkampani ngokubhekisele kwezokhuseleko kwaye siyayibona kuzo zonke izinyuselo abazisungulayo. Sele sithethile kwii-podcast ukuba ukubuyela kwi-ID yesazisi siyibona ingenakwenzeka kuba yonke into ijolise kwi-ID yobuso (sibona indlela abayilungelelanise ngayo nokwazisa imaski ngamaxesha obhubhane). Siyazi ukuba iphikisene kodwa okucacileyo kukuba akukho okunye ukubonwa kobuso okufana ne-ID yobuso buka-Apple. Kwaye kuwe Ucinga ntoni nge-ID yobuso? Ngaba uyafuna ukusebenzisa i-ID yobuso kwiiMacs zakho? Sikufundele ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ngokuka-Gurman, i-ID yobuso iya kufika kwi-Mac kwiminyaka embalwa
Umyalelo ongaphezulu kwe-100 yezigidi ze-A15 Bionic chips ze-iPhone 13